Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1398
Pétanque – Mondial 2016 Tsy voafidy ny firenena hampiantrano ny hetsika
Mbola miandry ny fanapahan-kevitra, avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena, ny rehetra amin’izay hampiantrano ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny tsipy kanetibe, sokajy lehilahy. Nahemotra amin’ny 15 mey ho avy izao indray ny fanapahana izay firenena hampiantrano ny andiany faha-47 amin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja tsipy kanetibe, sokajy olon-telo miaraka lehilahy. Tsy mbola […]
Urban Trail II : mpihazakazaka 3250 no andrasan’ny Rotary Club Mahamasina
Par Taratra sur 13/04/2016 Divers, NS Malagasy
Raha “Ady amin’ny lefa-kozatra” ny lohateny nampitondrain’ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina ny hetsika “Urban Trail” tamin’ny andiany voalohany, nampitondraina ny anarana “Hazakazaka ho an’ny fanabeazana” indray izany amin’ny “Urban Trail II”. Araka izany, hotanterahin’ny Rotary Club Antananarivo Mahamasina, ny 17 avrily izao ny hetsika. Raha ny fanazavana, hetsika hoentin’izy ireo hanangonam-bola, hoenti-manampy ireo zaza sahirana […]
RFC Andiany faha-11 : niakatra ny lentan’ireo sarimihetsika hifaninana
Hisokatra ny zoma 15 avrily izao ny andiany faha-11 amin’ny hetsika ho an’ny sarimihetsika fohy, « Rencontres du film court » (RFC). Mpanatontosa sarimihetsika 17 no voafidy hifaninana sy haneho ny sanganasany mandritra izany. “Efa nanomboka nijery ireo sarimihetsika hifaninana izahay ary resy lahatra fa niakatra ny lentan’izy ireo amin’ity andiany ity”, hoy ny nambaran’ny mpikambana iray […]
Vakoka sy tahiry : hosokafana ny « Musée privé Paul Rapatsalahy »
Par Taratra sur 13/04/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha-100 taon’i Paul Rapatsalahy, hotanterahina ny asabotsy 16 avrily izao ny lanonana fanokafana indray ny « Musé privé Paul Rapatsalahy » eny Imerinafovoany Talatamaty. Marihina fa nosokafan’ity mpanoratra sady mpanao gazety ity ho an’olon-drehetra io mozea io tamin’ny taona 1964. Taorian’ny fodiany mandry anefa, nakatona izany ny taona 1988. Noho ny asany, […]
Par Taratra sur 13/04/2016 Economie, NS Malagasy
Tsy misy fanaraha-maso! Noraisina ara-teknika, andro vitsy lasa izay ny lalana avy eo Ambatolaona mihazo an’i Mantasoa. Raha nojerena ny famoaham-baovao informatika (site) an’ny Fahefana mandrindra ny tolo-barotra an’ny fanjakana (ARMP), fantatra fa mahatratra 751.691.098, 63 Ar ny tetibola nanamboarana ity lalana ity, mirefy 8 km. Nahazo ny tolo-bidy hanao ny asa ny orinasa Necoba. […]
Tsenaben’ny boky andiany faha-12 : hahazo laka ny boky amin’ny teny frantsay
Lohahevitry ny « Tsenaben’ny boky » amin’ity taona ity : « Ny boky sy ny kolontsaina marolafy ». Hetsika hotanterahina eo amin’ny Esplanade Antaninarenina ny 18 ka hatramin’ny 22 avrily izao. Hifandraika kokoa amin’ny fandraisan’i Madagasikara ny fihaonana an-tampon’ny frankofonia ny boky ho hita any an-toerana mandritra io dimy andro io, raha ny fanazavan-dRazafintsalama Marie Michèle, filohan’ny Association des éditeurs […]
“Opération Smile” : efa maherin’ny 1 900 ireo sima nodidina
Mitohy, hatramin’ny zoma izao, ny fandidiana maimaimpoana ireo olona sima na manana fahasamponana amin’ny molotra sy ny lanilany izay hatao etsy amin’ny HJRA ary karakarain’ny Fondation Telma. Efa andiany fahavalo ity fandidiana ny olona sima na “Opération Smile” ity. Raisina an-tanan avokoa ireo ankizy sy olon-dehibe nisoratra anarana sy nandalo fizaham-pahasalaman rehetra. Efa za-draharaha amin’io […]
Tsy ampy ny vokatra ronono eto Madagasikara, dimy taona izao tsy niova firy ny vokatra tsy maharaka ny tinady, raha ny fanazavana avy ao amin’ny minisiteran’ny Fiompiana. Tsy mahazatra ny mpanjifa koa anefa ny ronono. Tsy ao anatin’ny fahazaran’ny Malagasy ny manjifa ronono. Olana iray hafa ny fahefa-mividy. 5 l /taona /olona ihany ny fanjifana […]
FAO –Minisiteran’ny Fambolena : fifehezana ny rano ho an’ny fambolena
Tonga eto amintsika ny manampahaizana avy amin’ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (FAO). Antondian’izy ireo ny hijery ny toerana sy hamaritana ny sarintany azy azo hitantanana ny rano ho an’ny fambolena ho an’ny tantsaha madinika. Nanomboka ny volana jona 2015 ity fandaharanasa ity, ary hifarana amin’ny jona 2018. Tafiditra ao anatin’ny teknika ampiasaina hifehezana […]
Belalanda – Ambondrolava : velaran-tany efatra hekitara novolena honko
Nohatevenina ny ala honko ao amin’ny kaominina Belalanda, fokontany Ambondrolava. Zanaka honko 43.000 novolena amina velaran-tany efatra hekitara. Zanaka honko atao hoe Tanga no novolena amin’izany amin’ireo karazana honko fito misy sy hita aty atsimo. Tanjona ny hampifandraisana ny ala honko amin’iny morontsiraka avaratr’i Toliara iny, miala eo Belalanda mandalo ao Ambondrolava mipaka any Ambosibostiske. […]
Tanora tsy tara – Lasa aretin-tsaina… : mahazo vahana amin’ny tanora ny « chirurgie esthétique »
Tsy loza mitatao, saingy mitady ho lasa aretin-tsaina izy ity. Maro ireo « complexés » amin’ny vatany ka mirona amin’ny « chirurgie esthétique ». Mazava loatra fa rivotra nitsoka avy any ivelany izy ity. Taloha, ny tarehy no ratsy ka ny volo no haolanolana. Izao kosa, efa azo ovaina hatramin’ny tarehy sy ny bika ary mihatanora ireo roboka amin’izany! […]
Tabera Randriamanantsoa : “Misavoritaka ny raharaham-pirenena”
“Mampalahelo ny firenena… Tsy misy raha manjary intsony, fa ny tiana hatao no atao. Tsy mino aho hoe ho tafavoakan’ny praiminisitra vaovao ny baolina, satria misavoritaka ny raharaham-pirenena”, hoy ny minisitra teo aloha sady filohan’ny antoko Kintana, Tabera Randriamanantsoa, tao amin’ny haino aman-jery iray, omaly. Tamin’ny voalohany, niteny ny Praiminisitra Ravelonarivo fa tsy nametra-pialana. Nefa […]
Fanendrena praiminisitra vaovao : « Ahiana ny korontana politika… », hoy ny Rakotomalala Rija, AMMM
Par Taratra sur 13/04/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nitondra ny heviny taorian’ireny fametraham-pialan’ny Praiminisitra Ravelonarivo sy ny nanendrena ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana ireny ny eo anivon’ny Antoko Malagasy miara-miainga (AMMM), amin’ny alalan’ny mpisolovava, Rakotomalala Rija. Nametraka ny ahiahiny amin’ny korontana politika nefa koa nandroso vahaolana ny tenany. Kolo TV sy ny gazety Taratra : Ara-dalàna ve ireny fametraham-pialana nataon’ny Praiminisitra Ravelonarivo ireny sy […]
17 taona ny naha eveka ny Mgr Razanakolona
Tsingeri-taona maromaro. Nankalazaina, omaly teny amin’ny Ekar, Andohalo ny faha-17 taona nanosorana ho eveka ny Mgr Razanakolona Odon. Nankalazaina tamin’izany ny faha-70 taony sy ny faha-40 taona naha pretra azy ary koa ny fahafolo taona naha arsevekan’Antananarivo azy. Nanotrona izany ireo mpino kristianina marobe sy ireo tompon’andraikitra isan-tokony eo anivon’ny fitantanana ny vahoakan’Andriamanitra. Teo koa […]
Namoy mpiara-miasa ny tontolon’ny fampahalalam-baovao : nodimandry Andrianjaka Oelisoa Zoe Harivelo
Namoy namana mpiara-miasa ny tontolon’ny fanaovan-gazety sy ny haino amam-jery. Nodimandry, ny alatsinainy teo, teo amin’ny faha-46 taonany Andrianjaka Oelisoa Zoe Harivelo. Olon’ny fifandraisana, tia mifandray amin’ny hafa, sariaka, tia mizara… Izay i Oels, araka ny ahafantaran’ny maro azy. Izay rahateo no andraikitra nosahaniny tao amin’ny Masoivoho amerikanina nampiasa azy. Izy mantsy no niandraikitra ny […]
Milaza ny havan’ny zandary maty tany Fianarantsoa, fa novonoina ny havany. Fiaran’olona akaiky ny fitondrana nandona azy, izay tsy notanan’ny zandary hatramin’ny mpamily. Mitaky ny marina ireo fianakaviana. Nametraka fitoriana eto Antananarivo ny fianakavian’ilay zandary mpitaingina bemôtô maty tany Fianarantsoa, ny 28 janoary lasa teo, noho ny fiheveran’izy ireo fa maty nisy namono ny havany […]
Par Taratra sur 13/04/2016 En Bref, NS Malagasy
Hotanterahina anio eny Mahazoarivo, ny famindram-pahefana eo amin’ny Praiminisitra teo aloha, ny Jly Ravelonarivo Jean sy ny vaovao, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Anisan’ny ho avy hanatrika izany eny an-toerana, ankoatra ny mpanao gazety ireo solontena sasany eo anivon’ny fianakaviambe iraisam-pirenena sy ny mpamatsy vola. Manampy izany, ireo mpikambana sasany eo anivon’ny governemanta Ravelonarivo Jean. Handray ny […]
Naiditra am-ponja avy hatrany ny renim-pianakaviana sy lehilahy iray saron’ny polisy misahana ady amin’ny zava-mahadomelina teny Ambohidroa Ambohimanarina, ny alatsinainy teo. Nahazo loharanom-baovao ny polisy momba ny fisian’ity renim-pianakaviana mpanao trafikana zava-mahadomelina ity. Niaiky izy nandritra ny fanadihadiana nataon’ny polisy fa tena nivarotra rongony. Nanamafy anefa izy fa tsy azy ireo rongony namidiny io fa […]
Analanjirofo : lavanila halatra 3,5 taonina no efa saron’ny polisy sy zandary
Jiolahy iray no saron’ny polisy tao Mahanoro distrikan’i Fenoarivo Atsinanana, ny herinandro teo. Voarohirohy ho nangalatra lavanila maitso tsy mbola matoy milanja 1 taonina ity jiolahy ity. Araka ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, amin’ny volana mey ho avy izao no hanatanterahana ny atrikasa handinihana ny fotoam-piotazana lavanila ho an’ny faritra Analanjirofo. Manao ny ataony […]
Famonoana vazaha mivady : olona dimy voasambotry ny zandary, vehivavy ny iray
Roa volana taty aoriana, olona dimy voasambotry ny zandary manodidina ilay famonoana mpivady vazaha sy Malagasy, Sylvain Thorin sy ny Dr Marinette Razafindrazanabary, tany Antsiranana ny alin’ny 12 febroary lasa teo. Vehivavy ny iray tamin’ireo, izay voalaza fa anisan’ny atidoha tamin’ity famonoana ity, mipetraka any Mahajanga. Ny telo lahy no nanatanteraka ny famonoana. Voalazan’ny lehiben’ny CIRGN Antsiranana, […]
Ambatondrazaka : Sprinter nifatratra tao tranon’olona
Nitrangana lozam-piarakodia tany Ambatondrazaka akaikin’ny siniben-drano, ny alakamisy 7 avrily 2016 lasa teo. Araka ny fitantaran’ireo olona nahita izany, nosasan’ny mpamily mpanampy iray teo amin’io toerana io ilay fiara mpitatitra olona. Voalaza fa navelan’ny mpamilin’ilay fiara nihantona teo amin’ny toerany ny fanalahidin’ny fiara. Nony voadio anefa ilay sprinter, tsy fantatra izay nahazo ilay mpamily mpanampy […]
Izay ataonareo eo ê !
Par Taratra sur 13/04/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Hatao anio, raha tsy misy ny fiovana ny fifamindram-pahefana eo amin’ny praiminisitra teo aloha sy ny vaovao. Ho fantatra amin’ity herinandro ity ihany koa ny anaran’ireo minisitra handrafitra ny governemantan’ingahy, Mahafaly Olivier. Samy miandry izany, na ireo minisitra teo aloha maniry ny ho voatazona na ireo izay nametraka ny taratasy fahavononany hiasa ho an’ny tanindrazana, […]
Fitokonan’ny mpirakidraharaha sy mpandraharaha fonja : ahina hirongatra ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa
Par Taratra sur 13/04/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Mandra-pahoviana izao fitokonan’ny mpirakidraharaha amin’ny fitsarana sy ny mpandraharaha fonja izao? Mikatso ny raharaham-pitsarana. Ahina hirongatra ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa… Noho ny tsy fahatokisana tanteraka ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana? Na ny fitondrana ankapobeny, na tsy fankatoavana, na mety ho fanehoana tsy fahafaliana na fahatofohana… Tsy zava-baovao fa efa nisy hatramin’izay ny […]
Par Taratra sur 12/04/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Misy ady mangatsiaka ao anatin’ny 3FB, taranja rugby ankehitriny. Tsy mifankahazo ireo mpilalao tranainy sy ireo zandry aty aoriana. Marisarisa ihany koa ny fifandraisana eo amin’ny minisiteran’ny fahasalamana sy ireo zokibe. Na tsy hita mibaribary ety ivelany aza, misy tsy milamina ny ao anatin’ny ekipan’ny 3FB, taranja rugby. Namaky bantsilana izany, tamin’ny mpanao gazety ireo […]
« Précédent 1 … 1 396 1 397 1 398 1 399 1 400 … 1 488 Suivant »